AdraInformatica - Technology, Hardware, Software, Guides & maApp
Tekinoroji, Hardware, Software, Guides & maApp
Yakatumirwa muna Nyamavhuvhu 23, 2021
Tungamira kumutambo wevhidhiyo Bayonetta 3
Bayonetta 3 chikamu chechitatu, chakarongedzwa uye chakagadzirwa naPlatinumGames, yeakakurumbira hack uye slash saga inotarisana nemuroyi ane mukurumbira. Mutambo wevhidhiyo wakagadzirirwa chete Nintendo Chinja, iyo Nintendo koni.
Mutambo wevhidhiyo unokurudzirwa zvikuru kune vese vateveri vemutambo iBayonetta 3. Uyu mutambo wevhidhiyo nguva dzese painenge ichinyanya kuzivikanwa pakati pevateveri vayo uye avo vanosarudza kuzviedza. Uye zvinozivikanwa kuti kutamba mutambo weBayonetta 3 kunoshamisa.
Muchirongwa chinotevera iwe unowana ruzivo rwekuti utange kutamba nayo Bayonetta 3 ichave iri nyore kwazvo kwauri. Uye zvakare, ine matipi ekutanga kutamba mutambo usingatombofaniri kuve hangaiwa yakawira kubva mudendere, nekuti kunyangwe iwe ungasave nyanzvi, zvirinani kuti iwe unodzidza izvo zvekutanga.
Kuratidzwa kwemutambo kuri riini?
Rimwe remazuva anotarisirwa kune vateveri ve Bayonetta 3 es zuva rekuburitsa, panguva ino mutambo wevhidhiyo uchaburitswa uye unowanikwa pa consoles-inowanikwa. Chimwe chezvinhu zvinodikanwa kwazvo kuziva ese iwo mikana iyo ichaita kuti iwanikwe uye nhau idzo dzaizokatyamadza vanhu vanotevera.
Matipi ekumira kunze muBayonetta 3
Saka zvakakodzera kutanga kutaura nezve madhiri ayo achakubatsira iwe, panguva iyo Bayonetta 3 iri mumaoko ako, iwe unowana kuve nemitambo ine mhedzisiro iri nani. Izvi ndizvo zvimwe.
Wana ruzivo uye simudza yako nhanho: Kuvandudza uye kumira kunze kunokupa iwe yakawanda mikana uye iwe uchawana mukana pane vamwe vatambi vese. Aya ndiwo maitiro auchakwira kumusoro nekunatsiridza mikana yehunhu hwako, pamwe nehunyanzvi hwako.
Tsvaga kuti ndeipi Bayonetta 3 ine: Pachave pasina chombo chiri nani kupfuura ruzivo. Kuchengeta mupfungwa ndezvipi zvishandiso zvinoiswa nemutambo wevhidhiyo kwaunogona kukunda zvipingamupinyi zvakakosha kugadzirisa matambudziko nekukurumidza sezvazvinogona
Ita mazano matsva: Kunyangwe iwe wavaka imwe nzira iyo yaunogara wakasununguka nayo, usamire kuyedza zvinhu zvitsva, nekuti zvinokupa mukana wekutsvaga matekiniki anobatsira anozokubatsira kunatsiridza.
Gadzirisa kutonga uye marongero: Chinja kupinza, kutonga uye zvese marongero aunogona kuti kutamba kuve nyore kwauri. Kugadzirisa iwo maratidziro kunokutendera kuti uchinjise mutambo kune zvaunoda kuitira kuti mhedzisiro yako ive nani.
Mapuratifomu kwaunogona kuyedza Bayonetta 3
Neraki, mutambo wevhidhiyo inogona kuridzwa pazvinyaradzo zvakasiyana uye paPC, saka, hapana chikonzero chekumira kuyedza vhezheni ichazoburitswa. Dzimwe dzedzimwe nzira dzinozoitwa kuti dziwanikwe kuitamba pane koni ichave Dreamcast y Xbox, iyo yauchazowana mukana ku tamba nevamwe vatambi pamhepo kana kutamba mitambo munharaunda kana uchida.
Nenzira imwecheteyo ichave ichiwanikwa tamba mugore kuburikidza nemapuratifomu senge Steam uye Stadia yePC. Uchivashandisa haufanire kuda kuve neyazvino koni pamusika kana komputa ine yakakosha maficha iva nemitambo yakanakisa yemitambo.
Izvo izvo vavaki vayo vari kutsvaga ndezvekuti vanhu vazhinji sezvinobvira vanokwanisa kuwana Bayonetta 3. Saka ichaburitswa mushanduro dzakasiyana Nayo yekutamba ichave yakapusa uye inonakidza, zvese zvinoenderana nezvaunoda.
Zvino kana iwe usingakwanise kutenga ese mavhezheni aunoda uye panzvimbo pezvo iwe unofanirwa kusarudza pane imwe chete, usazvidya moyo, ese maBhaibheri ane varaidzo huru uye anovimbisa kuti uchafadzwa mitambo yakasarudzika yega yega uye mumapoka.
Iwe unoshuvira kuwana Bayonetta 3? Heano mamwe maitiro ako
Kana zvauri kuda zviripo tora bayonetta 3, iwe unongofanirwa kushanyira yako chitoro chaunofarira, kune iyo kwaunogara uchienda. Mushure mekuburitswa kwezuva, iwe unogona kuiwana pane ese anowanikwa ma consoles nemutengo unodhura.
Izvi zvakajairika kupfuura chero chinhu chine mitambo yevanonyaradza se PlayStation, kana Xbox; nyaradzo iyo avo vatambi vanonzwa kudzikama kwazvo uye vanofarira kuve neiyo yekutanga vhezheni yemitambo.
Imwe nzira, kana iwe usiri kuda kusiya imba yako, uri online shopping. Unogona kuzviita kuburikidza online vhidhiyo yemitambo zvitoro, kana zvakare mu mapuratifomu epamhepo, nenzira yakapfava uye yakavimbiswa.
Si shopu muzvitoro izvi zvepamhepo, iwe unochengetedza nguva nekuedza uye odha yako inosvika pamusuwo wemba yako, kana iwe unogona zvakare kukumbira iyo chaiyo vhezheni, kurodha pasi uye kuiisa pane yako console.
Asi zvakare mapuratifomu akadai seStadia kana Steam, anotendera iwe kuti unakidzwe mushure mekuburitsa muripo, uchishandisa maseva avo, zvinoreva kuti iwe unogona kutamba chero bedzi iwe wakabatana neInternet uye uri pasi pekunyorera.
Kuhaya sevhisi kunoreva, munguva pfupi, a kuduku kuduku pane kutenga mutambo wepakutanga, uyezve zvinokutendera kuti utambe mitambo yakawanda yakasiyana kwenguva yakati rebei.
Dzidza kutamba Bayonetta 3
Hapana chimwe chinhu chechokwadi kupfuura chirevo Kudzidzira kunoita tenzi, uye nzira yakanakisa yekugona pane chimwe chinhu kuisa muchimiro. Paunonyanya kuita basa, hunowedzera hunyanzvi.
Izvo zvinoitika nemitambo. Kana iwe uine veteran wakawanda, unonyanya kuteerera uchave uine uye huropi hwako ichave nekwanisi yekuvaka mamwe maitiro akaomarara. Saka kana izvo zvauri kutsvaga zviri dzidza kutamba Bayonetta 3 Chinhu chekutanga chaunoda kuti uite kudzikama uye kudzidzira kazhinji.
Kuti uve akanakisa unofanira zvakare sangana nevavengi vako. Maitiro ekufamba kwavo, mazano avo nemaitiro. Kuti uzvinzwisise unofanirwa kuzviongorora zvakanyanya. Izvo zvinhu izvo zvichabatsira iwe kuti uvakunde. Iwe unozogona kuwana kuti ndeapi masimba ayo uye zvakaipira. Zvakare, iwe unoda ziva hunhu hwevadzivisi vako. Kunyangwe vari maNPC kana vatambi chaivo, vese vanoshandisa hunyanzvi uye marongero ayo, kana iwe uchiziva ivo, unogona kuwana maitiro ekuabvisa zviri nyore uye kuve akanakisa.
Kana iwe uchikwanisa kuzviongorora nenzira kwayo, unogona kuwana kusasimba kwavo uye iwe uchazoziva maitiro ekushandisa iwo kukanganisa kwavo. Kuziva muvengi wako kunokupa mukana pamusoro pake.
Asi mira, mubvunzo haupere nemupikisi. Iwe uchasvika padanho raunenge uchisimba kwazvo, zvekuti unozviita muvengi wako, nenzira yakanaka. Fungisisa maitiro ako pachako uye inoshanda kuve zvirinani mazuva ese. Unogona kugara uri nani.
Munguva iyo iwe unodzidza vamwe vakwikwidzi iwe unogona kuwana kwavo kusimba uye kusasimba. Chinhu chakanakisa chaungaite kutora zvese zvinokubatsira, hazvireve kuti kuita marongero avo zvakangofanana, asi nezvekudzidza kubva kwavari nekuwedzera maitiro ako kwavari.
Chekupedzisira, gadzira mazano, tamba wakadzikama, uye gara uchitamba pachena. Idzi ndidzo nzvimbo huru kuti uve mutambi akanakisa weBayonetta 3. Tevedza aya matipi uye uchave padyo nepedyo uve nyeredzi.
Dzvanya kuti ugovane pa Twitter (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paFacebook (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paLinkedIn (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paPinterest (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paWhatsApp (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paTumblr (Inovhura muhwindo idzva)
Dzvanya kuti ugovane paPocket (Inovhura muhwindo idzva)
Ndinozvifarira Loading ...
Yakatumirwa muna Nyamavhuvhu 13, 2021
Ruzivo rwese rwaunoda kuti utange kutamba Elden Ring
Elden Ring ndomumwe wemitambo iyo iri kuwedzera vamwe vateveri. Iyo nzira inokwezva yekukudziridza uye inosanganisira mutambi inokonzeresa vateveri vayo kupedzisira vave vakavimbika uye kuti avo vasati vaifarira vanoda kuiridza.
Kune avo vari kutanga kuyedza neElden Ring, isu tinopa ino yakazara gwara rine mamwe mazano anobatsira kwazvo. Neruzivo urwu unogona kuwana chiratidzo chakajeka chezvaunofanirwa kuita kutanga kutamba usina kunyongana zvachose.
Mutambo wekuburitsa zuva
Vateveri ve Elden Mhete Vanofanira kunge vatove kugadzirira kuratidzwa kwemutambo kuti zviitike munguva pfupi iri kutevera zuva rekuburitsa, iyo yavanogona kutamba mairi consoles-inowanikwa. Uine mikana yakanaka yemavhidhiyo, kuuya kwemutambo wevhidhiyo kunoshuviwa kuti ugone kunakidzwa nezvinhu zvese zvitsva zvauchazounza nazvo.
Matipi ekumira kunze paElden Ring
Iyo inobatawo, tanga kurangarira iyo matipi ekukubatsira, panguva iyo Elden Ring iri mumaoko ako, unogona kuwana mitambo nekuita zvirinani. Tine zvimwe zvako.
Wana ruzivo uye wedzera kumusoro: Kufambira mberi uye shanduka zvinokupa iwe yakawanda mikana uye iwe uchave nebhenefiti pamusoro pevamwe vatambi. Neiyi nzira iwe unozokwira uye unovandudza mikana yehunhu hwako, kuwedzera kune hunyanzvi hwako.
Tsvaga kuti chii chinonzi Elden Ring: Pachave pasina chombo chiri nani kupfuura ruzivo. Kuchengeta mupfungwa ndezvipi zvishandiso zvinoiswa nemutambo wevhidhiyo kwaunogona kukunda zvipingamupinyi zvakakosha kuti ukasike kugadzirisa matambudziko
Dzidza nzira dzakasiyana dzekutamba: Dzimwe nguva a nzira yekutamba Inotishandira, asi nekuyedza sarudzo nyowani une mukana uri nani wekutsvaga nzira dzekuvandudza uye kuzadzisa chinangwa nehunyanzvi hukuru.
Gadzira marongero aunoda: Kuita shanduko dzaunogona mumeseji yemutambo kunogona kukubatsira kuti uwirirane zviri nyore uchitamba mutambo. Dzimwe gadziriso dzaunogona kuita dzinogona kunge dzine chekuita nechiratidziro, ruzha, zvinodzora, kana chero chinhu chinokutendera kuti utambe zvirinani.
Ndeapi maitiro iwe aunogona kutamba Elden Ring online?
Neraki, iwe unogona kutamba mutambo pazvinyaradzo zvakasiyana uye pakombuta, saka hapana chikonzero chekumira kuyedza vhezheni ichazoburitswa. Dzimwe dzedzimwe nzira dzichawanikwa dzichinakidzwa paconsoon dziri Dreamcast y Xbox, ine mukana wekuti tamba nevamwe vese vatambi online kana kutamba mitambo kumba kana uchida.
Chinangwa chikuru che kuvhura mushanduro dzakasiyana ndeyekuti mutambo wevhidhiyo unokwanisa kusvika kune akakura vateereri uye kuti zvakare kugovana nevamwe vatambi kuri nyore uye kunonakidza. Zvichienderana nezvaunoda, une mukana wekusarudza chero sarudzo dzinopihwa naElden Ring.
Zvimwechetezvo, dzese shanduro dzinosetsa uye dzinopa mukana we Nakidzwa nerakanakisa ruzivo wega uye mumapoka.
Kutenda nzira idzi iwe unogona kuwana Elden Ring
Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kuita tenga Elden Ring kuenda kuchitoro chiri padyo neimba yako, kana iyo yaunogara uchienda. Mushure mekuburitswa musi wemutambo wako, uye mumazuva anotevera, iwe uchave uchikwanisa kuiona ichiwanikwa pane ayo ese mapuratifomu.
Kune ese vatambi chaivo, zvinogara zviri nani kuva ne yekutanga vhezheni yemavhidhiyo mitambo. Nenzira iyi, vanoshanda pamwe nekugadzirwa kwemimwe mitambo yemavhidhiyo uye vanotsigira makuru mafranchise.
Asi iwe hausi kuzoiwana chete munzvimbo dzepanyama, asi zvakare uchave unokwanisa kuitenga mukati online vhidhiyo yemitambo zvitoro kana in mapuratifomu epamhepo mairi nekungova neakaundi chete, iwe uchakwanisa kutenga.
Si iwe unotenga muzvitoro izvi zvepamhepo, iwe unochengetedza nguva nekuedza uye odha yako inosvika pasuo rako, kana iwe unogona zvakare kutenga iyo chaiyo vhezheni, kurodha pasi uye kuiisa pane yako console.
Pamusoro pezvitoro zvemitambo yemavhidhiyo, pane sarudzo yekutamba nekuhaya pasuru yekunyorera. Mune ino kesi, hausi kutenga mutambo pachawo, asi kodzero yekushandisa akakura akasiyana mazita ekuremekedza kwenguva yakatarwa yenguva. Iyi ndiyo kesi yeStadia kana Steam.
Chinhu chakanakisa nezve aya mapuratifomu ndiwo mutengo wavo. Bhadhara kunyoreswa kuri zvakanyanya kudhura pane kutenga mutambo wevhidhiyo, uyezve zvinoita kuti zvive nyore kuisa akasiyana mazita.
Nzira yekukura sei muElden Ring?
Isu tese tinotanga sevanoziva nguva dzese patinosangana nechimwe chinhu chakasiyana, zvisinei nezvatakamboita mune dzimwe nzvimbo, kutanga chimwe chinhu kubva pakutanga chinogara chiri chiitiko chitsva, asi zorora, nekuedza iwe uchave nyanzvi.
Sezvatakambokuudza, iwe unofanirwa kudzidzira mune zvese zvaunotarisira kuita nenzira yakanaka. Ino nguva, mitambo yemavhidhiyo. Paunonyanya kuita, unowedzera kuita dzidza zvakavanzika zveElden Ring. Izvo zviri izvo, kana izvo zvauri kutsvaga ndizvo uve akanakisa Elden Ring mutambi, ipapo tinokurudzira kuti utange kudzidzira, uchazviwana nekutsungirira.
Kuti uve akanakisa iwe zvakare unofanirwa sangana nevavengi vako. Maitiro ekufamba kwavo, mazano avo uye hunyanzvi. Kune izvi unofanirwa kuvaongorora zvakanyatsonaka. Iwo madiki madiki ayo anozobatsira kwazvo kuvakunda. Iwe unozogona kuona kuti zvakanakirei uye kushaya simba ndezvipi. Tora izvo zvinokubatsira iwe uye shandisa zvakaipa. Kana iwe uchizviita zvinobudirira, unogona kuvabvisa zviri nyore. Kunyangwe vari maNPC kana vatambi chaivo, vese vanoshandisa hunyanzvi uye marongero ayo, kana iwe uchivaziva, unogona kuona maitiro ekuvakunda zviri nyore uye unogona kumira.
Kana uchinge wafunga kuti kuderera kwake chii, rova ​​kwaanonyanya kurwadza uye kumurova. Kuva nhanho imwe kumberi kunogara kuri mukana mukuru.
Asi mira, nyaya haigume nemupikisi. Iwe uchasvika padanho apo iwe uchave wakasimba kwazvo, kuti iwe ugozove wako wega anopikisa, munzira yakanaka. Dzidza ako matekiniki uye kudzidzira kuve nani mazuva ese. Unogona kugara uchivandudza.
Mukuwedzera kune tsvaga kushomeka kwevaikwikwidza navo, iwe zvakare uchaona izvo simba ravo. Panzira yako yekuve wakanakisa unofanirwa kuziva zvekunwa pachiitiko chega chega. Izvo zvirizvo, hazvingave zvakashata kuona izvo zvinhu zvinoshanda kune vamwe vatambi uye wozvichinjira kumatambo ako ekutamba.
Chekupedzisira, dzikama, usamhanye muchiito zvine hasha uye upe zano rakanaka rinozoita kuti zvive nyore kwauri kuti uite nenzira kwayo, kusvika pamhedzisiro yakanaka. Kana iwe uchikwanisa kutevedzera iyi mirairo, unogona kuva akanakisa muElden Ring.
Yakatumirwa muna Nyamavhuvhu 5, 2021
Beyond Kwakanaka & Zvakaipa 2 Game Nhungamiro
Mumwe wemitambo iyo iri kuwana mamwe mafeni Uye kutora kumwe kuwedzera kuri Kupfuura Kwakanaka & Zvakaipa 2. Uyu mutambo unokupa iwe unonakidza uye unokwezva nzira yekuita isingakundike mitambo, ungave uri mutsva kana watotamba mutambo wacho kare.
Ikozvino, iro ruzivo rwatino tarisa mune ino gwaro rinogona kubatsira zvakanyanya kana iwe uri kutanga kutamba Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2 uye uchida kuve nehumwe mukana. Nezano ratichakupa pazasi, unogona kunge usiri nyanzvi, asi zvakadaro, unenge uine ruzivo rwekutanga runokubatsira
Rini kuratidzwa kwe Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2?
Izvo zvakatoburitswa kuti zuva rekuburitsa Beyond Kwakanaka & Zvakaipa 2 iva iye zuva rekuburitsa, kubva panguva ino zvichienda mberi, vateveri vake vakatadza kubatsira asi kuva neshungu yekuziva kuti ndeipi mikana mitsva ichaburitswa neshanduro iyi, iyo inogona kutambirwa consoles-inowanikwa.
Tricks kumira kunze kwePashure Chakanaka & Zvakaipa 2
Saka, zvingave zvakanaka kutanga kutaura nezve iyo matipi ekukubatsira, saka kana Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2 zviri mumaoko ako, Nakidzwa nemitambo ine mhedzisiro iri nani. Tine zvimwe zvako.
Ramba uchidzidzira uye simudza yako nhanho: Kukwanisira mazano ako uye kusvika kumatunhu akakwirira zvishoma nezvishoma kunozokuita iwe mutambi ari nani. Mukuwedzera, kukwira kumusoro mumutambo kunovhura zvishandiso izvo zvinokubatsira iwe kuzadzisa chinangwa chako.
Tsvaga izvo Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2 zvinopa: Iko hakuna chombo chinobatsira kupfuura ruzivo. Kuchengeta mundangariro izvo zviri zvishandiso zvinoiswa nemutambo wevhidhiyo zvaunazvo kuti ukurire zvipingamupinyi zvakanakira kukurumidza kupindura kumatambudziko
Shandisa mazano ako nenzira dzakasiyana: Ndichiri zvimwe nzira Paunowedzera kuedza iwe unokwanisa kuwana kana kuita mafambiro anozoita iwe mutambi akanakisa.
Gadzira zvaunogadzirisa kuzvidzora uye marongero: Chinja iyo resolution, kutonga uye ese marongero anoibvumira kuti iite kutamba kuri nyore kwauri. Kuronga zvekutonga kunokupa iwe mukana wekumisa mutambo padanho rako rekunyaradza kuti uwane mhedzisiro inoshanda panguva yemitambo.
Maitiro aunogona kuyedza Kupfuura Kwakanaka & Zvakaipa 2
Iyo nyowani vhezheni yeBeyond Good & Evil 2 inovhara zvese zvinonaka, kana iwe uri fan of consoles kana kusarudza PC, iwe uchakwanisa kuyedza mutambo wevhidhiyo munzira dzakasiyana. Zvekunyaradza, unogona kuitorera PlayStation, Xbox , pakati pevamwe, kukupa iwe mukana wekuyedza uri kumba kana batanidza nevamwe vatambi pamhepo.
Asi iwe unogona zvakare tamba mugore kuburikidza nemapuratifomu akadai saSteam uye Stadia yekombuta. Nezvaunogona kuita pasina yazvino koni pamusika kana PC ine epamberi maficha ku tamba mitambo inonakidza.
Chinangwa che kuburitsa mushanduro dzakasiyana ndeyekuti mutambo unosvika kune akakura kwazvo vateereri uye kuti kutamba nevamwe vatambi kunowanikwa uye kunonakidza. Zvichienderana nezvaunoda, une mukana wekusarudza chero sarudzo dzinopihwa neBeyond Good & Evil 2.
Zvino kana zvisiri mukati mako kuti uwane maBhaibheri akati wandei sezvaungade uye iwe unofanirwa kusarudza pane imwe chete, usanzwe zvakaipa, yega yega vhezheni yacho inonakidzwa kwazvo uye inovimbisa kuti uchararama Unbeatable mechi vese vari vega uye nevamwe vatambi.
Kwokutenga kupi Kupfuura Kwakanaka & Zvakaipa 2?
Chinhu chekutanga chaungaite kuunza Kunze Kwezvakanaka & Zvakaipa 2 kuenda kuchitoro chiri padyo nepamba pako, kana icho chaunogara uchienda. Mushure mekuburitswa musi wemutambo wako, uye nemazuva anoenderera, iwe uchave uchikwanisa kuiona yakakodzera pane ayo ese mapuratifomu.
Zvakajairika mazuva ano kuti mafeni enyaradzo senge PlayStation, kana Xbox vanonyanya kunakidzwa kuva ne mavhezheni ekutanga ezvekuburitswa zvese.
Uye kana usina chitoro chemavhidhiyo munharaunda yacho, usazvidya moyo, unogona zvakare kutenga mitambo yako yevhidhiyo yaunofarira pa online vhidhiyo yemitambo zvitoro, kana mukati mapuratifomu epamhepo, kana iwe uine account yekutenga.
Tenga muzvitoro zvepamhepo Izvo zvakafanana nekutenga kubva kumba, zvakachengeteka uye zvakanaka. Uye zvakare, iyi sarudzo inobvumira kuti zita rako risvike pamusuwo wemba yako kana, kana uchida, unogona kusarudza iyo chaiyo vhezheni, iyo iwe yaunomisa yakananga pane yako koni.
Kune zvakare kunyorera vhidhiyo mutambo wepuratifomu masevhisi. Pane aya mapuratifomu unogona kutamba uchishandisa maseva epuratifomu, uchishandisa sevhisi inogara mugore. Kuti uite izvi, iwe unongofanirwa kuve neinternet yekubatanidza uye ubhadhare kunyorera.
Kuhaya sevhisi kunoreva, munguva pfupi, a yakaderera kuburitsa pane kuwana mutambo wepakutanga wevhidhiyo, uyezve zvinobatsira kutamba mitambo yakawanda yakasiyana kwenguva yakati.
Mamwe matipi ekuti uve akanakisa Beyond Kwakanaka & Zvakaipa 2
Hapana chimwe chinhu chechokwadi kupfuura kutaura Kudzidzira kunoita tenzi, uye nzira yakanakisa yekuvandudza chimwe chinhu kuiisa mukuita. Paunonyanya kuita basa, hunyanzvi hwaunowana.
Pfungwa imwe chete iyi inoverengerawo mitambo yemavhidhiyo. Kana iwe uchishuvira kuve mudzidzisi, iwe unofanirwa kudzidzira. Naizvozvi, uropi hwako hunozoenderana nemirairo uye nehungwaru hwekunyepedzera kweKunopfuura Kwakanaka & Zvakaipa 2, kugadzira zvirongwa zviri nani uye marongero. Saka kana uchida uve mudzidzisi muBeyond Zvakanaka Nezvakaipa 2, tanga kudzidzira.
Chimwe chinhu chinogona kukubatsira zvakanyanya chiri dzidza hunhu hwevavengi vako. Kufungidzira mafambiro emuvengi uye kuongorora maitiro avo kunogona kukuswededza padhuze nekuona kushomeka kwavo. Iwe unozogona kuona kuti zvakanakirei uye kushaya simba ndezvipi. Unodawo ziva maitiro evavengi vako. Kunyangwe vari maNPC kana vatambi chaivo, vese vanoshandisa hunyanzvi uye matekiniki ekuti, kana iwe ukavadzidza, iwe unozogona kuwana maitiro ekuabvisa iwo nyore uye uve akanakisa.
Kana iwe waona kuti chii chiri kushaya simba kwake, murwise iye uko zvinonyanya kurwadza uye kumuuraya. Kugara nhanho imwe kumberi nguva dzose kunoreva mikana iri nani.
Saizvozvowo, tsvaga izvo zvaunokanganisa Izvo zvinokubatsira iwe kuvasimbisa uye kukuita iwe kusimba, saka zvakare ongorora ako maitiro uye uakunde pese paunowana mukana. Izvo hazvina basa kana vakambokubatsira kare, zvirokwazvo unogona kukura zvakanyanya.
Del kuongororwa kwevadzivisi vako Iwe unowana mhando mbiri dzezvinhu: izvo zvavanoita nemazvo uye izvo zvavasina kugona kwazvo. Pane zvakaipa tatoita macomments; tora mukana wavo. Zvakanaka kudzidza kubva kune avo vanoita zvakanaka. Hakusi kungoikopa chete, zviri nani kuti ugadzirise kune ako marongero uye nzira yako yekutamba, kuti uenderere mberi munzvimbo yaunonyatsoita.
Chekupedzisira, usaite nekuchimbidza, ronga marongero ako zvakanaka uye nekumisikidza kwenguva pfupi zvibodzwa. Nenzira iyi unozosvika zvishoma nezvishoma zvinangwa zvako. Kana iwe ukatevera aya matipi, zuva rega rega iwe unenge uri padyo nekuve zvakanakisa muBeyond Zvakanaka & Zvakaipa 2.
Yakatumirwa muna Nyamavhuvhu 2, 2021
Nongedzera kumutambo wevhidhiyo Dead Island 2
Dead Island 2 ndeimwe yemitambo yemavhidhiyo iyo iri kuwana mamwe mafeni. Nzira yayo inonakidza yekusvinura uye inosanganisira mutambi inokonzeresa avo vanoiridza kuti vave vakavimbika uye kuti avo vasina kuiridza vachiri kuda kuyedza.
Kune avo vatsva kuFree Island 2, tinopa gwara rakazara rine matipi anobatsira. Neruzivo urwu iwe unozogona kuve nerakafara pfungwa yezvaunofanirwa kuita kutanga kutamba usingave wakarasika zvachose.
Zvatova pachena kuti iyo nguva yekutanga Dead Island 2 iva iye zuva rekuburitsaKubva zvakapihwa ruzivo urwu, vateveri vake havana kukwanisa kudzivirira kufara kuti vazive izvo zvitsva zvingaburitswe neshanduro iyi izvo zvinogona kunakirwa consoles-inowanikwa.
Matipi ekumira mu Dead Island 2
Ino inguva yakanakisa yekutaura zvimwe kwauri hunyengeri kuitira kuti iwe ugone kuita mitambo muFree Island 2 ine mhedzisiroSaka kana mutambo wacho waburitswa unozviwanira iwe nhanho imwe kumberi. Izvi zvakanyorwa pazasi.
Wedzera ruzivo rwako uye wedzera kumusoro: Kuvandudza nekushanduka kuchavhura masuo kwauri uye iwe uchawana mukana pamusoro pevamwe vatambi. Aya ndiwo maitiro auchakwira kumusoro nekuvandudza mikana yemunhu wako, pamusoro peunyanzvi hwako.
Dzidza nezve maturusi aunogona kushandisa mu Dead Island 2: Chimwe chinhu chinokuisa iwe nhanho kumberi kuziva maturusi ayo iwe vhidhiyo mutambo yaunokupa iwe. Nekuziva mashandisiro uye nguva yekushandisa izvo Dead Island 2 inoita kuti uwanikwe, iwe unozogona kuishandisa nenzira inokodzera kusvika icho chinangwa
Edza nzira dzinoverengeka dzekutamba: Dzimwe nguva a nzira yekutamba Inotishandira, asi nekuyedza sarudzo nyowani une mukana uri nani wekutsvaga nzira dzekuvandudza uye kuzadzisa chinangwa zviri nyore.
Chinja marongero kune ako madiro: Kuva nemitambo umo marongero anokupa nyaradzo kunokupa iwe mukana wekuwana mhedzisiro iri nani. Kugadziridza iyo skrini uye odhiyo marongero uye kuodha iwo maratidziro maererano nezvaunoda zvinobatsira kwazvo.
Maitiro aunogona kutamba Dead Island 2
Pachave pasina munhu asingatori chikamu, Dead Island 2 ichave iripo kune vese avo vanofarira consoles kana PC, Kuita kuti zviwanikwe zvese zviri zviviri. Pakati pezvinyaradzo zvinopa mukana wekunakidzwa nemutambo wevhidhiyo ndeizvi Dreamcast y Xbox, uko vatambi vanogona tamba munzvimbo kana nekubatana nevamwe vatambi pamhepo.
Asi ichave iripo tamba mugore kuburikidza nemapeji senge Steam uye Stadia paPC. Kuvashandisa, hazvizove zvakafanira kuve neazvino koni pamusika kana komputa ine yakakosha maficha ku nakidzwa mitambo inonakidza kwazvo
Saizvozvo, pachave nemukana we tamba mugore, ipapo haufanire kunge uine timu yepamusoro yekuyedza Dead Island 2. Pamaseva emapuratifomu akadai seStam neStadia, iwe unozokwanisa tamba mitambo inonakidza pakarepo.
Ehezve, chinangwa ndechekufadza vateereri vakafarisisa. Zveizvi iwe uchawana akasiyana mavhezheni eakafa Island 2 inopindura kune zvakawanda zvinodiwa, zvese zvinoenderana nezvinodiwa nemunhu wega wega pakusarudza sarudzo yakakodzera kwazvo.
Imwe yeshanduro inopa kunakidzwa kukuru, saka usazvidya moyo kana uchifanira kusarudza pane imwe yacho. Iva nechiitiko chinoshamisa mauri uchave nemukana wekuyedza wega uye nevamwe vanhu Zvakachengeteka.
Kubudikidza nenzira idzi unogona kutenga Dead Island 2
Para tora Dead Island 2 iwe unofanirwa kuenda ku Tamba chitoro iri padyo kana enda kune iyo yauri kunyanya kuvimba nayo. Mushure mekuburitswa iwe unowana ese ayo maitiro nemutengo unosvikika.
Izvi zvakajairika kupfuura zvese ne mitambo yevanonyaradza se PlayStation, kana Xbox; zvinonyaradza izvo vashandisi vayo vakasununguka kwazvo uye vanoda kuve yavo yekutanga vhezheni yemitambo.
Asi masisitendi epanyama haasi iwo ega sarudzo. Kana iwe usina chero chivakwa padyo, kana iwe usingade kusiya imba yako, unogona kuzvitenga pa online zvitorokana mapuratifomu epamhepo.
Pfungwa yakasimba yezvitoro izvi ndeyekuti haufanire kusiya imba yako kuti utenge. Mutambo unosvika chaipo pasuo rako, kana iwe unogona kuutora mushure mekuburitsa muripo uye nekumisa ipapo ipapo.
Asi zvakare mapuratifomu akadai seStadia kana Steam, anotendera iwe kunakirwa mushure mekuita muripo, uchishandisa maseva avo, zvinoreva kuti iwe unogona kutamba pese pawakabatana neInternet uye uri pasi pekunyorera.
Kushandisa sevhisi iyi zvinoreva, munguva pfupi, a kubhadhara kwakaderera pane kuwana yepakutanga vhidhiyo mutambo, uyezve zvinobatsira kushandisa akawanda mazita eimwe nguva.
Ungaita sei zviri nani muakafa Island 2?
Isu tese tinotanga kuve vanoziva nguva dzese patinosangana nechimwe chinhu chitsva, zvisinei neruzivo rwekare rwatinahwo mune dzimwe nzvimbo, kuyedza chimwe chinhu kubva pakutanga kunogadzira manzwiro akasiyana, asi akadzikama, nebasa iwe unova nyanzvi.
Izvo zvinoenda kumitambo yemavhidhiyo. Izvo zvakanyanya ruzivo iwe urwo, iko kuri nani kupindura iwe kwauchazove nako uye nehuropi hwako vane kugona kuvaka matekiniki ari nani. Saka kana izvo zvaunoda zviri dzidza kutamba Dead Island 2 izvo zvaunoda kuti uite kushivirira uye kudzidzira kazhinji.
Chimwe chinhu chinogona kuita kuti basa rako rive nyore zviri ongorora marongero evavengi vako. Kufanotaurira kufamba kwevavengi uye kunzwisisa matekiniki avo kunogona kukuisa padhuze nekufukunura nzvimbo dzavasina kusimba. Iwe unozokwanisa kuwana zvazvinoita zvakanaka nezvakaipa. Unodawo dzidza kutamba kubva kune vavengi vako. Kunyangwe vari maNPC kana vatambi chaivo, vese vanoshandisa hunyanzvi uye matekiniki ekuti, kana iwe uchiziva ivo, unogona kuona maitiro ekuvakunda zviri nyore uye uve wakanyanya.
Nekuziva izvo zvinoita muvengi zvakanaka nezvakaipa, uchave nebhenefiti pamusoro pake. Zvinoenderana neruzivo rwako kuti ukwanise kutora mukana iwoyo kuhwina.
Uyewo, Ziva zvaunokanganisa Izvo zvinokubatsira iwe kuvasimbisa uye kukuita iwe uve akasimba, saka zvakare dzidza ako marongero uye uagadzirise iwo pese paunowana mukana. Izvo hazvina basa kana vakambokushandira, zvirokwazvo iwe unogona kunatsiridza.
Del kuongororwa kwevadzivisi vako Iwe unozowana zvinhu zviviri: izvo zvavanogona uye izvo zvavasina kugona kwazvo. Pane zvakaipa isu tinotozviratidza isu pachedu; tora mukana wavo. Zvinhu zvakanaka zvakanaka kudzidza. Izvo hazvisi zvekuzviita chete sezvazviri, chakanakira kuchinjanisa nemaitiro ako uye nzira yako yekutamba, kuti uenderere mberi kunzvimbo yaunenge wakadzikama.
Chekupedzisira, usaite semunhu anopenga, namatira kumatekiniki ako uye gadza zvinangwa zvenguva pfupi. Nenzira iyi iwe unozogona kuzadzisa zvinangwa zvako zvishoma nezvishoma. Kana iwe ukatevera aya matipi, iwe unenge uri padyo nekuve imwe yeakanakisa mu Dead Island 2.
Zvese zvaunoda kuti uzive kutanga kunakidzwa Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2
Mumwe wemitambo yemavhidhiyo uyo iri kuwedzera kukurumbira Uye kutora boom kwakanyanya Kunze Kwezvakanaka & Zvakaipa 2. Uyu mutambo wevhidhiyo unokupa iwe chinonakidza uye chinonakidza chiitiko chekugadzira mitambo isingaenzanisike, ungave uri wekutanga kana kuti watotamba mutambo wacho kare.
Pamusoro pezvo, ruzivo rwuri mugwaro urwu runogona kubatsira zvakanyanya kana iwe uchingotanga muBeyond Zvakanaka & Zvakaipa 2 uye uchida kuwana imwe bhenefiti. Nemazano atinawo kwauri izvozvi, unogona kunge usiri nyanzvi, asi iwe unowana ruzivo rwekutanga runokubatsira
Fans of Beyond Kwakanaka & Zvakaipa 2 vari kugadzirira kugamuchira kuratidzwa kwemutambo mu zuva rekuburitsa, iyo yaunogona kunakidzwa nayo consoles-inowanikwa. Nemikana inoshamisa yemitambo yemavhidhiyo, kusvika kwemutambo wevhidhiyo kunotarisirwa kuti ugone kunakidzwa nenhau dzese dzaunounza.
Matipi ekumira kunze kwe Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2
Zviri pachena mukana wakanakisa wekuzvipa iwe hunyengeri hunoita kuti zvive nyore kwauri kuti uite mitambo isingatendeseki yekuti Beyond Kunaka & Zvakaipa 2 zviri pamunwe wako. Zvimwe zvinotevera.
Wedzera ruzivo rwako uye simudza yako nhanho: Kufambira mberi nekushanduka kuchakupa mimwe mikana uye iwe uchave nebhenefiti inoenderana nevamwe vese vatambi. Aya ndiwo maitiro auchakunda nekuvandudza mikana yehunhu hwako, kuwedzera kune hunyanzvi hwako.
Tsvaga izvo izvo Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2 zvinokupa iwe: Kana chimwe chinhu chikakupa mukana, chiri "ziva". Kuva wakatsanangura kuti ndeapi maturusi emutambo uye mashandisiro aungaita zvakakosha kukunda zvipingamupinyi zvingave zviri mumutambo
Shandisa nzira dzinoverengeka: Kunyangwe iwe waita iyo nzira Izvo zvaunonzwa kugutsikana nazvo, gara uchiedza zvinhu zvitsva, nekuti zvinokupa mukana wekutsvaga matekiniki anobatsira anozokutendera kuti uvandudze.
Chinja marongero aunoda: Kuita iyo misiyano iwe yaunoda mune yevhidhiyo marongero emutambo zvinokubatsira iwe kurarama zviri nyore kana uchitamba. Imwe yegadziriro yekugadzirisa inogona kunge iine chekuita, odhiyo, zvinodzora kana chero chinhu chinokutendera kuti uite zvirinani.
Mapuratifomu ayo Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2 zvichatambwa
Iyo nyowani vhezheni yeBeyond Good & Evil 2 ndeye munhu wese, kana iwe uri fan of consoles kana uchida PC, mutambo unogona kuyedzwa nenzira dzakasiyana. Zvekunyaradza, unogona kuitorera PlayStation, Xbox uye vamwe, vachikupa iwe mukana wekuyedza uri kumba kana batanidza nevamwe vanhu online.
Nenzira imwecheteyo ichave ichiwanikwa tamba mugore uchishandisa mapeji senge Steam uye Stadia pakombuta. Nezve izvi hazvizove zvakakosha kuve neazvino koni pamusika kana komputa ine hunhu hwakakosha ku unakirwe mitambo
Izvo zvaunosarudza zvichave nezvakawanda zvine chekuita nezvaunoda uye bhajeti rako. Nenzira iyi iwe unogona tsvaga Kunze Kwezvakanaka & Zvakaipa 2 mune dzakasiyana shanduro. Izvo zvinotsvakwa ndezvekusvika kune akakurisa vateereri uye kuita kunakidzwa nemutambo kuve nyore uye kune wese munhu.
Saizvozvowo, yega yega vhezheni ine sarudzo dzinovaraidza uye inoita kuti ivepo mukana we nakidzwa nerakanakisa ruzivo uchitamba wega kana mumapoka.
Ini ndoda kutenga Beyond Zvakanaka & Zvakaipa 2, ndingaenda kupi?
Nhanho yekutanga kuenda tora Beyond Kwakanaka & Zvakaipa 2 kushanyira chitoro chiri padyo nemusha wako, kana icho chaunogara uchienda. Kana zuva rekuburitsa mutambo wako rasvika, uye mumazuva anotevera, unogona kuzviona zviripo pamapuratifomu ayo ese.
Ndiyo nyaya ye mitambo yevanonyaradza senge PlayStation, kana Xbox. Kunyanya, kune avo vese mafeni vanogadzira manzwiro akanaka nekuve navo mune yavo yekutanga vhezheni yemitambo yako yaunofarira.
Nekudaro, iwe hausi kuzoiwana chete muzvitoro zvepanyama, asi iwe zvakare unozokwanisa kuipinza mukati online vhidhiyo yemitambo zvitoro kana in mapuratifomu epamhepo mauri iwe unofanirwa kuve neakaundi imwe chete yekutenga.
Si iwe unotenga muzvitoro izvi zvepamhepo, iwe unochengetedza nguva nekushanda uye mutambo wako unosvika kumba kwako, kana iwe unogona zvakare kutenga iyo chaiyo vhezheni, kurodha pasi uye kuiisa pane yako console.
Kunze kwezvitoro zvemitambo yevhidhiyo, pane imwe nzira yekutamba pasi pekunyorera package. Mune ino kesi, hausi kutenga mutambo pachawo, asi kodzero yekunakidzwa akasiyana siyana emitambo kwenguva yakatarwa yenguva. Iyi ndiyo kesi yeStadia kana Steam.
Kushandisa sevhisi iyi zvinoreva, munguva pfupi, a kubhadhara kwakaderera pane kutenga yepakutanga vhidhiyo mutambo, uyezve iyo inokutendera iwe kunakidzwa nemazita mazhinji enguva yakatarwa nguva.
Nzira yekudzidzira kutamba Beyond Kwakanaka & Zvakaipa 2?
Isu tese tinotanga sevanoziva nguva dzese patinosangana nechimwe chinhu chitsva, zvisinei nezvakaitika kare zvatiinazvo mune zvimwe zvinhu, kutanga chimwe chinhu kubva pakutanga chinogara chiri chiitiko chakasiyana, asi wakadzikama, uine tsika uchave nyanzvi.
Zvakadini Kudzidzira kunoita tenzi inogona zvakare kushandiswa mumitambo. Paunonyanya kudzidzira, zvirinani kuti ugadzirise kune Beyond Yakanaka & Zvakaipa 2's kutonga uye AI mhinduro. Saka kana iwe uchishuvira ku ive imwe yeakanakisa muBeyond Zvakanaka & Zvakaipa 2, zadza nemoyo murefu uye nechido chakanaka, uye dzidzira kwenguva yakareba.
Chimwe chinhu chinobatsira kuwedzera maitiro ako ndiyo dzidza vavengi vako. Unogona kuona zvainoita zvakanaka nezvakaipa. Unodawo ziva kuti vatambi vako vanotamba sei. Kunyangwe vari maNPC kana vatambi chaivo, vese vanoshandisa mafambiro uye marongero ayo, kana iwe uchivaziva, iwe unozogona kuona maitiro ekuvarova nyore uye kuve vakanyanya.
Kana iwe waona kuti chii chiri kushaya simba kwake, rova ​​paanonyanya kurwadza uye umukunde. Kuva nhanho imwe kumberi kunogara kuri mukana mukuru.
Sezvo pawakaongorora muvengi wako, unofanirawo kudaro ongorora uye unzwisise ako matekinoroji nemhedzisiro yavanokupa. Kunyangwe iwe uri kuita zvakanaka, iwe unogona zvirokwazvo kugadzirisa pane imwe nguva. Ongorora matekiniki ako zuva nezuva uye uone kwaungave uri nani.
Mukuwedzera kune tora huipi hwevavengi vako, iwe uchaonawo izvo simba ravo. Mukuda kwako kuve wakanakisa, iwe unofanirwa kuziva chekutora pane imwe nhambo. Izvo zvirizvo, hazvingave zvakashata kuona izvo zvinhu zvinoshanda kune vamwe uye wovaumba ivo kunzira yako yekutamba.
Chekupedzisira, usaite nekuchimbidza, namatira nemazano ako uye gadza zvinangwa zvenguva pfupi. Nenzira iyi unozosvika zvishoma nezvishoma zvinangwa zvako. Kana iwe ukatevera aya matipi, iwe unenge uri padyo nekuve zvakanakisa muBeyond Zvakanaka & Zvakaipa 2.
Copyright © 2021 · Kodzero dzose dzakachengetedzwa · AdraInformatica
Makumi mapfumbamwe Retro Organic Themes · RSS feed · Access
A %d blogger seizvi: